အရေးမပေးသင့်သော မိန်းမများ ~ Myanmar Express
From : ဆူးနှင်းဆီ
အင်္ကျီလယ်ဟိုက်sexyကြိုက် ယောက်ျားများရှေ့ ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်တက်သောမိန်းမ....
အင်္ကျီပါးပါး တမင်ဝတ်ထား အတွင်းသားတွေကိုပြချင်သောမိန်းမ....
စကတ်တိုလက်တအုပ် အရှက်ထုတ်ကို မလုံ့ တလုံပေါ်အောင်ဝတ်တက်သောမိန်းမ....
ခေတ်ကိုတင်စား ရင်သားနဲ့ တင်ပါးမှာတက်တူးထိုးထားသောမိန်းမ....
နောက်ကြောပြောင်ချော အမှောင်တောမှာ ကချင်လှုပ်ချင်တဲ့မိန်းမ....
ဘောင်းဘီအသားကတ် အနေမတက် ခြေထောက်ကိုကားထိုင်သောမိန်းမ....
ယောက်ျားတွေမြင် အကွက်ဆင် ချွဲပျစ်ပျစ်ပြောတက်သောမိန်းမ....
မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးရှဲဒိုးသုံး မြင်မကောင်းအောင် မျက်တောင်တုတွေတက်ထားသောမိန်းမ....
သွားမှာစိန်မြှုတ် ရယ်စရာမဟုတ် ရယ်စရာလုပ်ဤ တဖြဲဖြဲရယ်ပြနေသောမိန်းမ....
လူစုံလျင်ဂျင်းသုပ် သုပ် အတင်း တလှုပ်လှုပ်ပြောတက်သောမိန်းမ....
အလုပ်နားရက်ထမင်းမချက် အပျင်းထူပြီး တစ်နေကုန်အိပ်သောမိန်းမ....
ဝင်ငွေရရေးလက်မနှေး ဦးနှောက်မရှိတိုင်း ဗေဒင်မေး ချဲထိုးသောမိန်းမ....
လမ်းသွားလျင်မျက်စိရွှင် စမတ်ကျသောယောက်ျားတိုင်းကို ပြုံးပြသောမိန်းမ.....
အပြောပက်စက် လက်ကသွက် တို့ဆိတ် လိမ်ဆွဲဤ ပြောတက်သောမိန်းမ...
အိမ်မှာကြွက်သိုက် အပြင်မှာ ခက်မိုက်မိုက်ဝတ်တက်သောမိန်းမ....
အတုနဲ့ အစစ်ရောလို့ ဝတ် လူမြင်တိုင်းအမိအရကြွားတက်သောမိန်းမ...
ပြည်ပမှာစာသင် ငါသာသခင်ဟု ပညာဂုဏ်မောက်နေသောမိန်းမ....
နိုင်ငံခြားပြန် အခွံသာကျန် အပျိုရည်ပျက်နေသောမိန်းမ...
ရည်းစားရှိလည်း နံ့ ကြောဆွဲ သာတာမြင်ရင် မျက်စောင်းထိုးတက်သောမိန်းမ
ရင်ဖုံးအင်္ကျီချိတ်လုံချည်နဲ့ ဘုရားကအပြန် ကာအမှန်တွေနဲ့ ပါ ပါသွားတဲ့မိန်းမ...
အရှက်ကနဲ ရက်ကွက်ထဲ လူတကာအော့ကြောလန်အောင် နှုတ်ကြမ်းသောမိန်းမ...
Rapperဆိုရင်အသေကြိုက် အဖေရိုက်လည်းရိုက်ပစေဆိုတဲ့ ဆက်စလူးစိန်မိန်းမ....
အလုပ်ပြီးလျင် net ဆိုင်ဝင် လူတကာနဲ့ အရသာခံကြူတက်သောမိန်းမ....
အဖော်နောက်လိုက် အပျော်ကြိုက် လမ်းသလားသောမိန်းမ.....
ကိုးရီးယားဆိုအထင်ကြီး ငရုပ်သီးစက်တာကိုတောင် အူပါး လို့ အော်တက်တဲ့မိန်းမ....
15 May 2012 15:49
17 May 2012 03:55
သူက ဘာသွားပြောတာတုန်း မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာ ဒီကလေးမ မသိသေးဘူးထင်တယ်
18 May 2012 00:42
ကုန်ပြီ အရေးပေးဖို့တစ်ယောက်မှကျန်တော့ဘူးရော ဟဟဟ
အရေးပေးသင့် တဲ့သူတွေကော ကျန်ပါဦးမလား
တယ်ကောင်းတဲ့ စာချိုးပေချိုးပဲ...အားပေးတယ်ဗျာ..Myanmar Express ကြီး အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ပါစေ....
ပြည်ပမှာ စာသင် ငါသာ သခင်ဟု ဂုဏ်မောက်နေသောမိန်းမကိုပြင်ပေးပါ လက်မခံပါ၊အမေစုကို တိုက်ရိုက်ပြောသလိုလျှင်လက်မခံပါ။
29 May 2012 23:14
ဟိုက် တေရော.. ရွေးစရာတောင်မရှိတော့ဘူး... :(
30 May 2012 13:24
31 May 2012 20:27
တော် တယ် ဗျာမိ န်းမတွေ က ကော င်း တာ မ ဟု တ် ဘူး ဗျ
2 June 2012 07:59
တစ် ခု လောက် တော့ မေး ချင် ပါ တယ် ခု ဒီ စာ သား တွေ ကို ရေး ထား တဲ့ သူ က ကော ဘယ် လို မိန်း မ မျိုး ယူ ထား လဲ လို့ ကျ နော် ထင် တယ် ခု ခေတ် မှာ ဒီ မိန်း တွေ ကို ရှောင် နေ ရ ရင် ဘယ် ယော င်္ကျား မှ မိန် မရ မှာ မဟုတ် တော့ ဘူးလို့ခု လို ပြော ပြ ပေး တာ ကို တော့ ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ်
အဲ စော် ကို သိ တယ် ကျောက် မြောင်း မှာ နေ တယ် မ လား အဲ ကောင် မ က မိုး ကုတ် က ပြောင်း လာ တာ လို့ ပြော တာ ဘဲ သူ ဘာ သူ တော့ နာ မည် သိ တယ်
9 June 2012 19:26
ွှအဲဒီမိန်းတွေအကုန်လုံးကို ကျနော်ကြိုက်တယ် အလန်းတွေဆိုလာထားပဲ ဟိဟိ
11 June 2012 14:31
မြန်မာ့ ဗီဒီယိုဇတ်လမ်းများတွင် အထက်ပါမိန်းမများကို ကြည့်ကြပါကုန်......
14 June 2012 13:42
ကုန်ပါပြီ ....ဘာမှမကျန်တော့ဘူး ဟ...
မိန်းကလေးအားလုံးကို သတိပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
myo maung maung myint
15 June 2012 22:01
စာသားတွေကို ကြိုက်တယ်ဗျိုး... ဆရာကြီးတင်လိုက်ပြီနော... ကြည့် ရှောင်ပါ့မယ် အဲဒီ့ဟာမမျိုးတွေကို...
16 June 2012 10:30
'ဒီအတိုင်းသာဆိုရင် အရေးပေးရမယ့်မိန်းမ ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး
16 June 2012 23:02
ဂွတ် ရှယ် ပါ။ အ ရေး ပေး သင့် တဲ့ မိန်း မ များ အ ကြောင်း ကို လည်း စာ ချိုး ပေး ပါ ဦး။ အ ရေး မ ပေး သင့် တဲ့ ယော င်္ကျား ကော ........။
ယူစရာ..မိန်းမ ကုန်ပြီ..မမရေ။ရှိတဲ့ ရည်းစားတောင်..ကွာချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။.ကြည့်ရတာတော့..ဒီစာက မိန်းခလေးရေးထားတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်...ငါ့ကောင်တွေရေ.
25 June 2012 23:15
27 June 2012 11:57
what the fucking good man' you should post like this .
27 June 2012 21:02
လူတိုင်း ပုခုံနှစ်ဖက်ကနေခေါင်း ထွက်လာကြတာချည့်ပဲ ဘယ်သူမှနဖူးမှာ ဟိုဟာတက်မပေါက်ဘူး အသိညာဏ်ရှိတယ် ဦးနှောက်ရှိလို့ လူလို့သတ်မှတ်တာ သူ့ဟာသူစောက်ရှက်မရှိတာကအကြောင်း မဟုတ်ဘူး တို့လူမျိုးတွေစောက်ရှက်ကွဲနေပီ ကောင်မတွေ ကမ္ဘာ မှာမြန်မာ လို့တောင် မပြောရဲအောင်ဖြစ်နေပီ သတိထားကြဟေ့......
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတချို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင် ရင်...
အင်တာနက် လျှောက်ထားသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ ၂၄ နာရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် တစ်လ စော ကာ သူရဦးရွှေမန်း လန...
ရုရှားရှိ နှုကလိယ ရေငုပ် သင်္ဘောများကို ဂျပန်တို့ ကူည...
ဆီးရီးယားနိုင်ငံအပေါ် အီးယူမှ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုအသစ်...
နေပြည်တော်တွင် ပထမဦးဆုံး စက်မှုဇုန် တည်ထောင်မည်
အနောက် အုပ်စုတို့ အပေါ် အလျှင်စလို စစ်ပွဲများနှင့် ...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု ၂ဝ၁၅ တွင် လွှတ်တင်ရန် တရု...
President Obama's Statement on Myanmar
အမေရိကန် - မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး (၂) ဦး၏ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတိပေးရုတ်ဖို့ ပြောနေပေမယ့် အမေ...
လှူဒါန်းငွေများကို ကိုယ်ကျိုးသုံးစွဲနေသော (၈၈)မျို...
တက်တူးထိုးတဲ့ ကောင်မလေးတွေ အကြောင်း ဇာတ်ကားတွင် ဒေ...
မြောက်ကိုရီးယားတို့ နှုကလိယ ဓါတ်ပေါင်းဖို ပြန်လည်ေ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှစ၍ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်...
အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြေလျော့ရန် ကမ္ဘာ့စက်မှုအင်အ...
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်း နှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်...
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးဝ...
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ တူရကီနု...
အမေရိကန်သမ္မတ ရာထူး နေရာအတွက် Romney မှာ Obama ထက် ...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အောက်ခြေမှ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းေ...
စာနယ်ဇင်း ကောင်စီကို သမ္မတ အတည်ပြု ဖွဲ့စည်းမည်
နေတိုးကို အလိုမရှိဟု ဗြိတိန် ပြည်သူတို့ ကြွေးကျော်...
ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ပင်စင်အစီအ...
လုံးချင်းဝတ္ထုများ စိစစ်ရေးတင်ရန် မလိုတော့
တောတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ဆက်လက် အလင်းဝင်ရောက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၏ ဖြေကြားချက်(vid...
ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်း ခြောက်လိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံနှ...
စင်ကာပူအကူအညီဖြင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မင်းဓမ္မတွင် ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဆောင်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုကေ...
ယနေ့ထုတ် ရောင်စုံ သတင်းစာ (၁၅-၀၅-၂၀၁၂)
အသက် ၆ဝ ကျော်အမျိုးသမီးများအတွက် Virgin Lady Fashi...
လိမ် လည်း လိမ် ... အလိမ်ပေါ်တော့ လည်း ငြိမ် နေကြသူမ...
နီပေါနိုင်ငံတွင် အမျိုးအမည်မသိ ရောဂါတစ်မျိုး ကူးစက...
Eleven Media Group ရဲ့ Admin ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်အ...
အနောက်နိုင်ငံများ၏ ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုများကို မိမိတို...
နိုင်ငံခြားငွေ အတုအစစ် စစ်ဆေးသည့် ငွေရေတွက်စက်များ...
ဦးဝိစာရလမ်းရှိ အလယ်ကျွန်းများ ဖျက်ခဲ့ရခြင်းနှင့်ပ...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဥ...
လူတဦးချင်းအခွင့်အရေး၊ သတင်းသမားအခွင့်အရေး၊ လုံခြု...
Blogger အချို့ သူများယောင်တိုင်းလိုက်မယောင်စေချင်
KIA ဆိုသည့်အဖွဲ့အစည်း မကြာခင်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မည်...
မြန်မာကို စစ်တိုက်ရန် ဘင်္ဂလီတွေ အသုံးချရန် အိန္ဒိယ၊ဘ...
မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂ၏ ကျင့်ဝတ်များ (မူကြမ်း)
တိုင်းဒေသကြီး များတွင် မေလအထိ ဖုန်းအလုံးရေ ၃ သိန်း...
မြန်မာ-ထိုင်းဘဏ်အချင်းချင်း တရားဝင် ငွေလွှဲနိုင်မည်...
ပလူတိုနီယံများကို မြေမြုပ်ပစ်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများ ...
အမေရိကန်ကြားဖြတ် တိုက်လေယာဉ် အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ် ...
ဟိုးအရင်တုန်းကပေါ့ဗျာ ..ကျွန်တော်တို့ နယ်ဘက် က ရွာတစ်ရွာမှာ အရမ်းနတ်ကြီး တဲ့ နတ်စင်ကြီး တစ်စင်ရှိ သတဲ့ဗျ ။ အညာ ဒေသ မှာ ကသိတဲ့တိုင်း နတ်တွေကလည်းအရမ်းပေါကိ...